Masar oo ka hadashay dadaalka ay ugu jirto la dagaalanka burcadbadeeda xeebaha somaliya – SBC
Masar oo ka hadashay dadaalka ay ugu jirto la dagaalanka burcadbadeeda xeebaha somaliya
Posted by editor on Juun 12, 2011 Comments
Al-askandariya:- kuxigeenka wasiirka arrimaha dibadda dalka Masar ahna u qaabilsanaha wasaaradda arrimaha dibadda la dagaalanka waxa loo yaqaan argagaxisada Ambassador Ashraf Muxsan oo ka hadlayey kulanka shanaad ee uga furmay magaalada labaad ee dalka Masar kooxda xiriirka caalmiga ee la dagaalanka burcadbadeeda xeebaha soomaaliya ayaa ku nuuxnuuxsaday in Masar ay dadaal ugu jirto martigelinta kulumada la xiriira sidii wax looga qaban lahaa burcadbadeeda xeebaha soomaaliya.
Ambassador Muxsan ayaa carabaabay in loo baahan yahay in la helo iskaashi caalami ah iyo mid goboleed sidii loo soo afjari lahaa waxa uu ku tiulmaamay Musiibada burcadbadeeda.
Safiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in dowladda Masar ay ka tahay xubin firfircoon kooxda xiriirka caalamiga ee la dagaalanka burcadbadeeda xeebaha soomaaliya.
Sidoo kale shirkaan uga furmay xarunta akaadiimiyada carbeed ee culuunta iyo technology-ada magaalada Al-askandariya kooxda xiriirka caalamiga ee la dagaalanka burcadbadeeda ayaa waxaa la filayaa in diirada lagu saaro arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, milateriga iyo sidii iskaashi buuxa uga yeelan lahayd beesha caalamka iyo dowladaha kulaala badda cas iyo badweynta Hindiya arrimaha la dagaalanka Burcadbadeeda.
Kooxda xiriirka caalaiga la dagaalanka burcadbadeeda ayaa ka kooban afar guddi oo kala ah guddiga milateriga oo ay dowladda Britain hogaaminayso, guddiga sharciga oo dowladda Denmark madax u tahay, guddiga arrimaha farsamada gaarka ah socdaalka badda oo dowladda mareykanka hor kacayso iyo dublumaasiyadda guud oo ay dowladda masar hogaaminayso.
Waxaa xusid mudan in shirkan lagu lafaguri doono arrimaha burcad badeeda badweynta Hindiya iyadoo sidoo kalana xal loo raadinayo burbcadda dhanka dhulka ama bariga.